..........: Photoshop စာအုပ်ပေါင်းများစွာ
Photoshop 7.0 (မြန်မာလို)
Photoshop လို့ အသံကြားလိုက်တာနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိရင်တောင်မှ နားယဉ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ . တစ်ကယ်တော့ ဒီဇိုင်းအပိုင်း အပြင်အဆင်ကို စိတ်ဝင်စားရင် Photoshop ကို စိတ်မ၀င်စားလဲ အနည်းအကျဉ်းတော့ လေ့လာမှ ရမှာပါ . ကျွန်တော်ကတော့ ဒီဇိုင်းလေးတွေ လုပ်နေရရင် ကြေနပ်နေတာပါ . ၀ါသနာပဲပါတယ် .
အောက်မှာ ကျွန်တော် ebook တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . မြန်မာလိုပဲရေးထားတာဖြစ်လို့ နားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ် .. ကျွန်တော်လဲအားတာနဲ့ ebooks တွေလုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ် . ဘာတွေကို ရေးမယ်ဆိုတာကတော့ တိတိကျကျ မစဉ်းစားရသေးပါဘူး . တောင်းဆိုတာများလာတဲ့ software မျိုးကို ရွေးချယ်ပြီး ရေးပေးသွားပါ့မယ် . .
Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download rapidshare ၊ Download megaupload ၊ Download 4shared
Adobe photoshop CS အကြောင်း မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးရတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အထူးသဖြင့် ပြည်ပရောက် သူငယ်ချင်းများအတွက် အထောက်အကူရအောင်လို့ပါ . အခုခေတ်မှာ photoshop ကတော့ လူတိုင်းနီးပါး လေ့လာသင့်တဲ့ program တစ်ခုပါ . website design ပဲလုပ်လုပ် ၊ ဓါတ်ပုံပဲပြင်ပြင် တစ်ကယ့်ကို ထိရောက်တဲ့ program တစ်ခုပါ . အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ် . Download လုပ်လိုက်ပါ .
Adobe photoshop cs, cs2, cs3, cs4, cs5 မှာသုံးတဲ့ Tools တွေအကြောင်းကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကို အသေးစိတ် ရေးသားပေးထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ. photo editing သမားများအတွက် လုံးဝအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်. စိတ်ဝင်စား သူများ အားလုံး အောက်မှာ ကြိုက်တဲ့ link ကသာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ. အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .
Download ifile.it | Download mediafire | Download zshare | Download ziddu | Download rapidshare | Download hotfile | Download megaupload
adobe photoshop cs4 အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို)
Photoshop tutorial စာအုပ်များ (မြန်မာလို)
ကဲ ဒါကတော့ တောင်းထားတာကတော့ ကြာပါပြီ စုပြီးတော့ ၃ အုပ်တင်ပေးလိုက်တယ် . အားလုံးပဲ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . နောက်ပိုင်းကျွန်တော် Plugin လေးတွေကို တင်ပေးပါဦးမယ် . ခုတော့ ဒီစာအုပ်ကလေးတွေထဲကအတိုင်း စမ်းပြီးတော့ ဒီဇိုင်းလေးတွေ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ . အာလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .
Posted in: မြန်မာ ebooks များ
TunAung Ahdee December 16, 2016 at 3:04 AM
download တစ်ခုမှ လုပ်လို့မရဘူး။
ချစ်​ခဲ့ မိသူပါ January 13, 2017 at 11:58 AM
ဟုတ်​တယ်​ဗျ ကျွန်​​တော်​လည်း download လုပ့်​လို့ ရဘူး
ချစ်​ခဲ့ မိသူပါ January 13, 2017 at 11:59 AM
Kaung Kaung May 27, 2017 at 5:43 AM